Ny Fampianaran' i Pasteur Daniel Rakotozandry (Farihimena) | Madagascar features website
Tuesday, September 4, 2012 - 08:46
Dadatoa Rakotozandry Daniel,
(Raiamandreny mpanorina ny Tobilehibe FARIHIMENA, akaikin' Antsirabe).
Amin' izao fotoana isehoan' ny karazam-pampianarana samihafa izao, dia tsara ny hampahatsiahivana ny fampianarana sasantsasany (araka izay voaangona), nomen' ny mpanompon' Andriamanitra nahatoky teto Madagasikara, niasa tany amin' ny taona 1940 tany.
Ilaina izany mba tsy hahavery ireny lova soa sy sarobidy ireny, fa mba ho tafita amin' ny taranaka aty aoriana.
Ny mampiavaka ity raiamandreny mpitarika fifohazam-panahy ity amin' ny hafa dia noho izy tena nianatra teolojia mihitsy, ary nivoaka tao amin' ny Seminery STL, tao Ivory Fianarantsoa tamin' ny taona 1946.
Nomena fanomezam-pahasoavana maro samihafa koa izy, ary anisan' izany ny fandrenesany ny feon' I Jesosy miresaka aminy mivantana, sy ny fahalalana ny ao am-po tsy miloakan' ny olona izay manatona azy.
Raha atao bango tokana ny fampianarana natolony, dia ny Tenin' Andriamanitra no hany fototry ny fampianarany rehetra.
Naoriny mivantana tamin' ny Soratra Masina mihitsy ny fampianarany manontolo, ary ny fiainany koa dia nifanaraka tamin' ny Soratra Masina nampianariny.
Izy rahateo koa moa, hatramin'ny fahazazany dia fatra-pitia ny mamaky ny Baiboly. Koa rehefa nampianatra izy dia nampitandrina ny olona mba tsy horaisina "ila" ny tenin' Andriamanitra; fa ny venti-kevitry ny Baiboly iray manontolo no tokony horaisina sy hampiharina eo amin' ny fiainana andavanandro.
Hoy Dadatoa Rakotozandry matetika :
" Manatona ny Pastoranareo ka mianara tsara ny Soratra Masina. Aza avela hipetrapetraka ny Pastoranareo, fa hatony izy, ary takio mihitsy mba hampianatra anareo izay rehetra tokony ho fantatrareo ao amin'ny Baiboly.
Tsy misy mampisy sy mampaharitra ny maha-Kristiana afatsy ny Soratra Masina irery ihany, izay manitsy ny dianareo ary manome hery mahavonjy anareo; fa ny Filazantsara dia herin' Andriamanitra ho famonjena izay mino.
Tadidio tsara izany …".
1. Ny Fibebahana
Anisan' ny nahafantarana an' I Dadatoa Rakotozandry ny hamaroan' ny olona mibebaka rehefa mandre ny toriteniny.
Nambarany tamin' izany fa mba hampisy ny fibebahana, dia fitoriana ny tenin' Andriamanitra aloha no tokony homasahina tsara, satria io ihany no afaka manorotoro ny fo vato-n' ny olona ka hiteraka ny fibebahana ao aminy.
Toy izao ny fomba fanaony rehefa mitarika fotoam-pivavahana :
- Misy olona maromaro asainy mifandimby mampahalala ny ventin-kevitry ny Soratra Masina amin' ireo mpiangona
- Rehefa avy dia asainy mandini-tena mangina ireo olona nitoriana ireo, na mifanaraka amin' ny sitrapon' Andriamanitra ny fiainany, na tsia : ny atao, ny toe-po, ny teny, ny fitondran-tena, …
- Dia mitsangana amin' izay izy mitory teny koa, ary mamehy sy manamafy izay voalazan' ireo nampianatra Soratra Masina teo ireo.
- Dia manendry hira anankiray izy, ary miangavy ny olona rehetra samy hieritreritra fatratra ny amin' ny fahotan' ny tenany, fa tsy ny an' ny hafa
- Rehefa tapitra ilay hira, dia mivavaka ary mangataka ny Fanahy Masina mba hidina, hanazava ny fon' ny mpiangona amin' ny fandinihan-tena ataony sy amin' ny fitadiavany famonjena
- Ary matetika dia voatsindrona ao am-pony ny olona ary maro no mibebaka amin-dranomaso.
- Dia miroso amin' izay amin' ny asa sy fampaherezana ho an' ireo malahelo am-panahy mitady fitsaharana ao amin' i Jesosy ireo.
- Ny amaranany ny fotoana dia teny fampiononana fohy avy amin' ny Filazantsara, avy eo dia miara-miredona ny fanekem-pinoana apostolika, na ny hira faha-331.
Ankoatry ny toriteny, dia nisy koa fomba iray nentin' I Pastora Daniel Rakotozandry nampibebaka ny olona. Izany dia tamin' ny alalan' ilay nantsoiny hoe "teny vavolombelona".
Amin' izany, dia misy olona iray, na maromaro, asaina mitsangana ery aloha, mba hanao fijoroana ho vavolombelona. Misy amin' izy ireo ny mpangalatra taloha, mpimasy, mpamono olona; ireo dia avela hitantara amin' ny mpiangona ny vokatry ny fahatsapan' ny tenany ny namonjen' Andriamanitra azy tamin' ny alalan' ny fibebahana.
Ireo olona ireo anefa dia tsy navelany hiteny vokatry ny hafanam-pony fotsiny, fa dia nasainy nanorina izay hambarany amin' ny tenin' Andriamanitra ihany koa; koa dia asaina mifidy toko na andininy iray avy ao amin' ny Baiboly izy ireo mba hanombohany ilay teny vavolombelona.
Tena nandaitra tokoa ireny teny vavolombelona ireny, indrindra tamin' ireo olona izay nahalala ny fiainana talohan' ilay nijoro ho vavolombelona, ka mahita ny fiovam-penitra mahery vaika eo amin' ny fiainany ankehitriny, sy ny fomba nanovan' Andriamanitra azy ho lasa olom-baovao.
2. Ny famoahana demonia
Ity indray dia nankininy amin' ny teny ao amin' ny Marka:16:17 :
Hoy Jesosy : "Ary izao famantarana izao no hanaraka izay rehetra mino: hamoaka demonia amin' ny anarako izy."
Io anefa dia tsy navelany hatao raha tsy efa nambara tamin' ireo olona hiasana aloha ny tenin' Andriamanitra, na taiza na taiza, na tao am-piangonana, na tany an-tokantranon' olona tany.
Hoy indrindra izy momba izany :
" Rehefa mandre sy mandray ny Tenin' Andrimanitra ny olona dia mora avoaka ny demoia , satria na ny demonia koa mba mino izany, ka dia mangovitra " (ampitahao amin' ny Jak:2:19).
Nohazavainy koa anefa fa ny kristiana dia tsy voatery hiandry olon-kafa hamoaka ny demonia ao aminy, fa samy afaka manao izany na iza na iza rehefa mino ny Filazantsara izy.
Ary nambarany koa fa mora miala ny demonia raha ilay olona itoerany efa mandroaka sy tsy tia azy intsony.
Aorian' ny fandroahana ny demonia no anaovana ny fametrahan-tanana. Io indray dia ny mpiandry miara-miasa aminy no asainy manao azy. Ary I Daniel Rakotozandry tenany dia kisendrasendra ihany no mba nahitana azy nametra-tanana.
Nantitranteriny ihany koa fa ny fametrahan-tanana dia tsy azon' ny rehetra atao, afatsy izay efa nianatra (niomana) ary voatokana marina ho amin' izany asa izany (Mpiandry na Pastora).
Momba an' io ihany dia nampitandreminy mafy ny mpiandry mba tsy hiasa na hametra-tanana raha tsy efa nangataka fitarihana tamin' Andriamanitra, ary indrindra indrindra tsy hihevitra hoe ny tenany no manome fampaherezana na mahavoaka ny devoly.
Ho izy indray mandeha :
" Efa nilaza tamiko Jesosy, fa misy tsy mangataka hery sy fitarihana Amiko akory ny mpiandry dia efa miasa sahady".
3. Ny fotoana fohy niasany
Fampianarana pratika mandrakariva no nataon-dRakotozandry. Tsy fampisehoana ny halalin' ny fahalalany, fa toro-lalana tsotra, nefa mazava ary "azo tsapain-tanana", mikasika ny fiainana an-davanandro sy ny toe-po fahita mandrakariva.
Indraindray izy dia mampiseho zavatra hita maso toy ny afokasoa ampirehetina, andriamby lehibe manintona, … Ary dia nahagaga tokoa fa dia nomen' I Jesosy hery handresy lahatra olona amim-pitiavana izy.
Tsy fampianarana hevi-teny teolojika lalina anefa no nataony, fa dia fanazavana tsotra ny hevitry ny tenin' Andriamanitra mba hahafantaran' ny olona ny ventin' ny fampianaran' I Jesosy sy izay tokony ho fanarahana izany eo amin' ny fiainana andavanandro.
Ny voninahitr' I Kristy no noezahiny haseho amin' ny olona mandrakariva, fa ny tenany dia tsy teneniny velively.
Noho izany fanetren-tenany izany dia tsy tiany mihitsy ny anandratan' ny olona azy hoe "mpaminany", kanefa moa ny olona dia tsy mety tenenina, ka dia nanao ihany.
Farany, indray andro dia niteny mafy taminy Jesosy hoe :
" Ilazao ny olona mba tsy ho hianao no tadiaviny fa IZAHO".
Koa dia nikely aina mihitsy izy nanambara fa "raha misy zavatra vita, dia tsy noho Rakotozandry, fa noho Jesosy. Ary Izy no tsy maintsy atao fototry ny atao rehetra".
Na dia niteny toy izany aza I Pastora Daniel Rakotozandry, dia sarotra ny nanitsy ny olona, ka nahatonga an' I Jesosy handray fanapahan-kevitra hentitra ka niteny taminy hoe :
" Takona Aho, alaiko hianao ".
Koa dia izay no farany nahitana ilay kintana namirapiratra, niseho tao Farihimena, ary niasa tao anatin' ny herintaona monja : 1946 – 1947.
Hitantsika amin' izany fa tena sarotiny tokoa Andriamanitra amin' io resaka voninahitra io. Izy irery ihany no tokony homena izany, fa tsy itambarany amin' ny hafa.
Koa raha mahita fihetsiketsehana hianao , ka misy anaran' olona iray na maromaro voatonona matetika sy omem-boninahitra ao, dia mieritrereta, fa Jesosy dia saro-piaro amin' ny voninahiny, ary Izy dia tena sahy mandray fanapahan-kevitra mandefa olona ho any amin' ny varotsimifody, eny fa na dia ny mpanompony malalany indrindra aza, raha ohatra ka manakona tsy ahitana Azy izany olona izany.
Ho voninahitr' Andriamanitra irery ihany.